5 manomano ekuva nyanzvi neApple TV | IPhone nhau
Nemazuva mashoma pamusika, vazhinji ndivo vashandisi vari kushandisa zvakanyanya chigadzirwa ichi. Mazhinji tech kana mablog anoenderana neApple haamire kutumira zvinyorwa pane ichi chishandiso chitsva chakavandudzwa makore matatu mushure mekuburitswa kwemhando yapfuura. Iyo nyowani Apple Remote yakavandudza zvakanyanya nzira yatinoshamwaridzana nayo neiyi nyowani kifaa, kana isu tikatenga iyo neiyo yapfuura modhi.
Kana iwe uri mumwe wevashandisi vari kutonakidzwa neichi chinhu chikuru, chinonyanya kuitika ndechekuti iwe unoziva unenge hunyengeri hwese hwahunotipa. Kana iwe usina kuwana nguva yekushandisa zvakanyanya, tinokuratidza matanho mashanu kuitira kuti iwe uve nyanzvi pachizvarwa chitsva chechina Apple TV.
1 Matanho mashanu kuve nyanzvi yeApple TV
1.1 Kuronga mashandisiro
1.2 Delete maapp
1.3 Mupumburu nekukurumidza
1.4 Wana mamwe mavara
1.5 Mimhanzi sarudzo
Matanho mashanu kuve nyanzvi yeApple TV
Sezvo neiyo iPhone kana iyo iPad, kuti ugadzirise zvakare icon yeapplication, unofanirwa kuenda kuchishandiswa chiri mubvunzo uye bata bata bata padhi kuti maapplication atange kutamba. Panguva iyoyo iwe unogona kufambisa iyo application iri mubvunzo kune kwainonyatsokodzera iwe.
Isu tichaenderera mberi nenzira imwecheteyo senge yapfuura sarudzo, kuitira kuti mifananidzo itange kufamba kana kutamba. Panguva iyoyo tinodzvanya bhatani reKutamba kuratidza menyu yekusimbisa kuidzima.
Kupinda password yedu paApple TV ibasa rakaoma sezvo isu tichifanira kufambisa kiyi nekiyi kuti tiipinde. Kuti tifambe nekukurumidza, isu tinongofanirwa kudaro tsvedza chigunwe chako pane chakabata padiki nechiedza chekumanikidza, kuitira kuti iyo inotora ifambe nekukurumidza kune iyo tsamba yatinoda.
Wana mamwe mavara
Kuti uwane mavara anonongedzwa, isu tinongofanirwa Dhinda uye bata bata padhi pane tsamba kana mucherechedzo patinoziva kuti iri, kuitira kuti mavara akasarudzika aoneke achivhunduka, sezvinoitika neiyo iPhone.
Kana isu tiri kuteerera mimhanzi paApple TV uye rwiyo rwatingave tichida kuchengetedza mune rwiyo rwemimhanzi kana kuwana rumwe ruzivo nezvazvo, tinofanira Dhinda padhi yekubata kwechipiri kusvikira menyu yezvinyorwa yaonekwa painotipa sarudzo dzakasiyana
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple tv » 5 manomano ekuva nyanzvi neApple TV
Mhoroi, pane chero munhu anoziva kana iTunes redhiyo yanyangarika. iyo yapfuura vhezheni yeapuro tv yaive nayo?
Kufananidza kwegore rekuchengetedza masevhisi